Uphawu lobuqu: imizekelo | Abadali be-Intanethi
Kwiminyaka embalwa, ukwenziwa kophawu lomntu kuye kwaba ligama eliviwa ngakumbi nangakumbi kwaye lifundiswa kwiikhosi ezininzi zokuthengisa ukuze kunyuswe ishishini, nokuba ngama-freelancers okanye iinkampani ezinkulu. Kodwa yintoni uphawu lomntu? Yeyiphi imizekelo yophawu lomntu ngamnye esinayo yempumelelo?
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ngubani omawujonge ukuba uzenzele eyakho isazisi kwi-Intanethi kwaye uzenzele igama, le yeyakho.
1 Yintoni uphawu lobuqu
2 Uphawu lobuqu: imizekelo yempumelelo ekufuneka ilandelwe
2.1 UMarie Forleo
2.4 URobert Kiyosaki
2.5 IBill Bill
2.6 ULuis Villanueva
2.8 UKarlos Arguiñano
Yintoni uphawu lobuqu
Ukwenza uphawu lomntu kunokuchazwa ngebinzana elithethwe nguJeff Bezos, owayesakuba yi-CEO yaseAmazon:
"Yinto abayithethayo ngawe xa ungekho egumbini."
Kodwa ukuphonononga nzulu kuyo yonke into ebandakanyayo, sinokuyicinga "njengesazisi kunye nondoqo esinikezela ngawo umntu wethu obonakalayo kunye nowokwenyama ukuseka unxibelelwano nabanye abasebenzisi, okwenyani okanye ngokwasemzimbeni." Ngamanye amazwi, ngundoqo wenkampani yakho, indlela ezichaza ngayo, indlela ethetha ngayo, indlela enxiba ngayo ...
Ukuyidala, kufuneka wenze uphando olunzulu olubandakanya:
Kumntu, ekubeni kufuneka wazi ukuba ngubani na umntu, yintoni efanelekileyo kunye nento engeyiyo ... ukuchaza isitayela sophawu.
Iinjongo ezinazo, kuba kungoko kuphela apho isicwangciso sinokufezekiswa.
Yazi ukuba ngoobani abaphulaphuli bakho. Yindlela umyalezo ofikelela ngayo kubantu obafunayo. Iso, ayithethi ukuba kufuneka utshintshe kwaye ujonge ukuba abathengi bakho bathanda ntoni, hayi. I-essence yakho kufuneka ibe yodwa kwaye ingaguquki kuba ayisayi kuba luphawu lomntu.
Uphawu lobuqu: imizekelo yempumelelo ekufuneka ilandelwe
Lumka ngokujonga uphawu lobuqu lwabanye, kuba ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, ungabakopa kwaye malunga nokuba uzibonakalise njengoko ufikelela kubasebenzisi bakho.
Oko kuthethiweyo, apha ngezantsi siza kukunika imizekelo yophawu lobuqu olunokukukhuthaza kwaye likuncede uchaze indlela ofuna ukuyenza ngayo.
UMarie ngumqeqeshi weshishini. Oko kuya kuthetha ukuba unzulu, ukude kwaye ukhule kakhulu. Kodwa akayenzi loo nto, uyayijika ibe yinto eyonwabisayo, ngaphandle kokulahlekelwa yingqondo yakhe okanye ulwazi alunikayo.
I-brand yakhe yobuqu igxile kuluntu kunye neemveliso zolwazi, kwaye ngenxa yoko usebenzisa icandelo elibonakalayo (kwiwebhusayithi, iividiyo, njl. njl.) ngexesha elifanayo Oko kukunika idatha exabiseke kakhulu.
Ukucinga ngetekhnoloji kucinga ngoSteve Jobs, umseki we-Apple owayesele efuna ukuqalisa, wayesazi ukuba uphawu lomntu luyinto ebaluleke kakhulu ukuba ufuna ukuthengisa.
Uyayazi indlela yokuzahlula kukhuphiswano lwakhe, hayi kuphela into ayenzayo, kodwa yena ngokwakhe. Esikhundleni sokugqoka kakuhle kwaye abonakale "ubutyebi bakhe," unxiba ngokulula kwaye usebenzisa unxibelelwano oluqinileyo ukuze aphumelele uluntu.
Ngokungafaniyo noninzi lwamanenekazi okuQala aseMelika, uMichelle Obama wayeyazi indlela yokwenza uphawu lwakhe lobuqu ngaphandle komyeni wakhe. Kwaye wayenza ngokugxila kwaye egxile kwiinkalo azithandayo ezifana nezemfundo, ubufazi, ezempilo, ucalucalulo.
Ukungenelela kwakhe kugcwele ukubaliswa kwamabali, oko kukuthi, ubalisa i-anecdotes, ubungqina, amabali ahlala ehlala kunye novelwano kunye nokudibanisa noluntu.
Igama layo lisenokungavakali liqhelekile kuwe. Kodwa incwadi ethi “Rich Dad, Poor Dad” isenokuvakala iqhelekile kuwe. Lo mbhali, usomashishini kunye nesithethi sesinye sezona zidumileyo e-United States kwaye uye wakwazi ukwenza uphawu lwakhe ngokugxila ekunikezeni iinkonzo kunye nokunika iinkomfa kwiinkampani.
Kakade ke, uye wakhupha iincwadi, imidlalo yebhodi, njl.
UBill Gates ufana noSteve Jobs, iteknoloji. Umseki weMicrosoft ngomnye wawona mashishini aziwayo kwaye abaluleke kakhulu emhlabeni kwaye uphawu lwakhe lobuqu lukwazile ukuziqhelanisa nokuhamba kwexesha.
Singakuxelela ntoni ngebhrendi yakho? Ewe, isekelwe ekuzameni ukukhangela icala eliqaqambileyo lezinto kunye nokuphucula ukudityaniswa kwehlabathi. Kodwa rhoqo ukusuka kwindlela elula, yokubonakala njengomntu oqhelekileyo ngenjongo yokunceda abanye.
Sisondele kancinci kuthi, kwaye kulo mzekelo umzekelo esikunika wona ngenye yee-SEO ezilungileyo kakhulu eSpain, uLuis Villanueva.
Ukuba niyamazi, niya kwazi ukuba ngumntu ovulelekileyo kumntu wonke, ophulaphula wonke umntu, ayiqonde into yokonakala, ngaphezu kokusoloko enikela intlabathi yakhe.
Indlela yakhe yokunxibelelana ilula, inovelwano kwaye ufuna ukuyenza ibe yincoko ekhululekileyo nemnandi, apho ungafundi nje kuphela, kodwa uphantse ukhumbule inqaku ngenqaku into ayenzileyo okanye ayithethileyo.
U-Isra Bravo ngomnye wababhali abakhuphelayo abathetha iSpanish namhlanje, kwaye uzakhele igama lakhe mhlawumbi ngendlela eyahlukileyo kunabanye. Amabinzana anjengathi “Makhe sibone, kuya kubakho…”, “into enye”, “kuhle”, “mhlawumbi kwaye uya kufunda okuthile” ubeka kwii-imeyile zakhe ezininzi kwaye enze umntu azi kakuhle ukuba uthetha nabani.
Uthe ngqo kwinto ayenzayo kwaye ii-imeyile zakhe, njengephepha lakhe, zimele yena, umntu ongachithi xesha kwaye ongenzi abanye bamoshe.
Ibinzana lika-Arguiñano elithi "isityebi, isityebi kunye nesiseko esihle" okanye into yokuba wayedla ngokubeka iparsley kuyo yonke into iye yahlala nathi. Wayengomnye wabapheki bokuqala ukuzahlula kwabanye ngokwenza ukupheka "kumnandi". Kwaye kukuba xa sipheka asizimisele ngokudibanisa zonke izithako, kwaye asigxininisi kuyo.
Sithetha nabanye abantu, sibukele iTV… Yaye yiloo nto ayenzileyo. Xa ephekile wayedlalisa irecipe namanyathelo awayewenza ngeziqhulo okanye amabali akhe, ngokungathi uthetha ubuso ngobuso nabantu.
Njengoko ubona, kukho imizekelo emininzi yophawu lomntu onokukukhuthaza ukuba uzenzele eyakho. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukungenzi ngathi ungumntu ongenguye, kodwa kunokukhuthaza indawo ofuna abanye bayazi kwaye ubenze bazibone bebonakala kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Uphawu lomntu: imizekelo
Izicelo zokwenza iilogo